Indlela Yokuziphatha yamaphrojekthi Womthombo Ovulekile | Kusuka kuLinux
Un Indlela Yokuziphatha yamaphrojekthi Womthombo Ovulekile kungaba yindlela ecacile neqondile yokwenza zwakalisa futhi zihlanganise nezindinganiso zenhlalo kanye nezokuziphatha nezintsha ngaphakathi kwemiphakathi yethu yentuthuko ebanzi neyomhlaba wonke «Software Libre y Código Abierto».
Yize ezimweni eziningi, ezinye izinhlangano, amaqembu noma imiphakathi, kwesinye isikhathi sezamukele ezinye indlela, umthetho olandelwayo noma isivumelwano sokuziphatha kanye / noma ukuxazulula izingxabano, okwamanje kwamukelwa ukufakwa kwe- Indlela yokuziphatha, ngoba phakathi kwezinye izinto eziningi, ukuxazulula ukuntuleka kokuhlukahluka okungahle kwenzeke lokho kungavela, ngenxa yokumelwa okungenamsebenzi noma okuphansi noma ukubamba iqhaza kwabesifazane, abantu bebala nabanye abantu ababhekelwe phansi.
Njenganoma yiliphi iqembu noma inhlangano, kwesinye isikhathi, imiphakathi yethu noma izinhlangano ezakha amaphrojekthi we «Software Libre y Código Abierto» kungahlosiwe, okungukuthi, ngokungenhloso noma ngokungenhloso izindawo ezingamukeleki futhi kwesinye isikhathi ezinobutha kubantu abahlukahlukene noma ngamaqembu abantu, ngenxa ye- izikhundla ezingayekethisi noma imibono engaguquguquki ngabaphathi bayo kanye / noma ngamalungu, maqondana nesihloko noma inhloso okuxoxwa ngayo lapho.
Kwezinye izimo, kungavela izimo lapho ukwephula kuyikho ukubamba iqhaza noma ukuhanjiswa okungafanele kwamaqembu abantu ababekhishwa inyumbazane, ngokuqagela mayelana nobulili noma ubuhlanga, ngokuqhakambisa ukuqiniswa kwezinkoleloze ngokusebenzisa ulimi oluncansi noma olungafanele, noma ngokukhombisa ukunganaki ukuphepha nenhlalakahle yabantu abasengozini noma ababhekelwa eceleni.
1 Inhloso Yekhodi Yokuziphatha
2 Indlela Yokuziphatha yamaphrojekthi Womthombo Ovulekile
Inhloso Yekhodi Yokuziphatha
Ngakho-ke, indlela yokuxazulula lezi zinkinga zomphakathi nezokuziphatha ezingaphakathi kwabahloniphekile nabathandekayo bethu «Comunidades de Software Libre y Código Abierto» kunjalo bakhululeke futhi bavuleke ngokwengeziwe, bethanda ukufakwa kwazo zonke izinhlobo zabantu ukufaka isandla kubo, futhi ubazise njengabantu abaphelele.
Ngaphandle kokunganaki, ukukhuthaza indawo enomusa, ukubambisana, kanye nokuqonda kwabo bonke ngokulinganayo. Ngamafuphi, kufanele sikhumbule ngaphakathi kwe- «Comunidades de Software Libre y Código Abierto» ukwamukelwa kwe Indlela yokuziphatha, isivumelwano sabakhokhi bentela, indinganiso ejwayelekile yabo bonke, esivumela indlela yokuveza nokuhlanganisa lawa magugu futhi esivumela ukuthi siwamukele ngokwengeziwe, ahluke futhi afake wonke umuntu.
Njengoba sishilo ngenhla, ukwamukelwa kwalokhu Amakhodi wokuziphatha isemfashinini, futhi phakathi kwezinto ezaziwa kakhulu singabala okulandelayo, okungezemidondoshiya emithathu yezobuchwepheshe yeqembu «GAFAM» ezinikela njengamanje kumaphrojekthi we «Código Abierto»:
Ikhodi Yokuziphatha Yomthombo Ovulekile weMicrosoft: Ekuziphatheni kwabo bachaza okulindelekile kokubamba iqhaza emiphakathini yemithombo evulekile ephethwe yibo, kanye nezinyathelo zokubika ukuziphatha okungamukeleki. Kuwo, bazibophezele ekunikezeni umphakathi owemukelayo futhi okhuthazayo kubo bonke. Futhi lapho, baveza ngokusobala ukuthi abantu abaphula le mithetho yokuziphatha bangaxoshwa emphakathini.
I-Facebook Open Source Code of Conduct: Kwindlela yabo yokuziphatha, bachaza intshisekelo yokukhuthaza imvelo evulekile neyamukelekayo emiphakathini yemithombo evulekile ephethwe yiyo, bezibophezela ekwenzeni ukubamba iqhaza kuyo kube yinto engenahlukumezi kuwo wonke umuntu, kungakhathalekile ubudala, ubukhulu bomzimba, ukukhubazeka, ubuzwe , izici zobulili, ubunikazi bobulili nokuveza, izinga lesipiliyoni, imfundo, isimo senhlalo yomnotho, ubuzwe, ukubukeka komuntu siqu, ubuhlanga, inkolo noma ubunikazi bobulili kanye nokuzikhethela.
Ikhodi Yokuziphatha Yomthombo Ovulekile we-Google: Kwindlela yokuziphatha yabo bachaza amanani nezinhloso ezifanayo, uma zingafani ncamashi nalezi ezi-2 ezingenhla.
Singabuye sihlole amanye amakhodi we Amakhodi wokuziphatha yemiphakathi ekhululekile futhi evuleke ngokwengeziwe, njenge:
Vula i-WebRTC Toolkit
Ukwazi nokuhlola okuningi okuningi Amakhodi Wokuziphatha wamaphrojekthi womthombo ovulekile Isixhumanisi esilandelayo singatholakala: Ukwamukelwa Kwamakhodi Wokuziphatha kuwebhusayithi Yesivumelwano Sabahlanganyeli.
Sithemba ukuthi ukhona "okuncane kodwa okuwusizo" ngalesi sihloko esithandekayo se «Código de Conducta para proyectos de Código Abierto», esanda kuba semfashinini kakhulu ezinhlanganweni ezisebenza ekwakhiweni kwalolu hlobo lwamaphrojekthi, inesithakazelo esikhulu futhi iyasebenziseka, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Indlela Yokuziphatha yamaphrojekthi Womthombo Ovulekile